Dadkii ugu badnaa oo calaamadaha COVID-19 ugu geeriyooday Beled Xaawo | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Dadkii ugu badnaa oo calaamadaha COVID-19 ugu geeriyooday Beled Xaawo
Dadkii ugu badnaa oo calaamadaha COVID-19 ugu geeriyooday Beled Xaawo
Xanuunsidaha COVID-19 ee uu keeno Coronavirus ayaa waxa uu iminka u muuqdaa mid faro kulul ku haya Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo, iyadoo ay jiraan dad badan oo astaamaha xanuunka ugu geeriyooday degmadaasi.
Saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa Degmada Beled Xaawo ugu geeriyooday calamaadaha lagu aqoonsado COVID-19 illaa 6 qof, oo ka mid ah dadka deegaanka.
U Qaybsanaha Caafimaadka ee Degmada Beled Xaawo, Dr. Axmed Caddow Maadey ayaa ku waramaya in degmada laga dareemay saamaynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19.
Dr. Axmed Caddow Maadey ayaa yiri “Xaaladda caafimaadka degmada ku saabsan ee la xiriira cudurka la yiraahdo COVID-19 waa mid u muuqata mid ka sii dareyso maalinba maalinta ka dambeyso, ayadoo la arki arko dad badan oo xanuunkii caalamadihiisii leh oo sii kordhaya maalin walba, dadka qaarna ay u dhinteen, qaarna ay la xanuunsan yihiin oo guryaha la jiifaan.”
Inta qof ee lagu arkay calaamadaha COVID-19, isla-markaana ay iyagu ka warqabaan ayuu ku tiradoodu ku sheegay 34 qof, kuwaa oo 6 ka mida ay uga shakisan yihiin in ay xanuunka u geeriyoodeen.
“Qiyaas dhab ah lama samayn karo, waayo dadka xaafadihii magaalada iyo daafaheeda oo dhan ayay ku xanuunsan yihiin, laakiin inta aan sida rasmiga ah uga warqabno ama aan guryahooda ku booqanay waa 34 ruux. Dadka u dhintay oo aan la baarin oo aanan xaqiijin in ay cudurka u dhinteen iyo in kale, laakiin shakigiisa aan qabno inay u dhinteen waxay gaarayan lix ruux.” Ayuu yiri Dr. Axmed Caddow Maadey.
Isagoo la hadlayay VOA ayuu yiri “Ma dhihi karno boqolkiiba boqol waa COVID-19, oo dadka baaritaan sax ah maanan marsiinin sababo jiro awgood, baaritaankii waan qaadnaa laakiin meeshii aan marin lahayn baa culeys naga haystaa, oo Xarunta Shaybaarka Xamar oo kale sidii lagu gayn lahaa baa culeys ka jiraa, laakiin dadka waxaan ugu maleynay inay xanuunkii qabaan, horta xaalad positive ah waala xaqiijiyay oo magaaladii wuu yaallaa. Dadkan xanuunsan calaamadihii xanuunka uu lahaa baa ka muuqdo, dadka qaar urtii baa ka tagtay, qaarkood waxay ku leeyihiin waxba ma dhadhamin karno, qandho daran ayaa qabaneyso, jirkii oo dhan baa jajabaayo. Dadkii xanuunkii isku si’ buu u qabanayaa, waana calaamadihii lagu sheegay xanuunka inuu wato.”
Dr. Maadey ayaa ugu dambeen Maamulka Gobolka Gedo, Wasaaradda Caafimaadka iyo Hay’adaha Caalamiga ahba ugu baaqay in ay ka gacan-siiyaan, sidii lagu xakameyn lahaa xanuunkaasi.